आइजीपीको नातीले म्यादी प्रहरीमा फर्म भरेपछि,प्रहरीमा खैलाबैला – YesKathmandu.com
आइजीपीको नातीले म्यादी प्रहरीमा फर्म भरेपछि,प्रहरीमा खैलाबैला
मङ्गलबार २२, चैत २०७३
पत्याउन गाह्रै पर्ला ! आइजीपीका नाती म्यादी प्रहरी भन्दा । तर यस्तै विवरण देखेर प्रहरीका अधिकारीहरुले चित्त खाएका छन ।
म्यादी प्रहरीको आवेदन संकलन गर्ने क्रममा १७ वर्षीय पुजन बरालको तीनपुस्ते विवरण देखेपछि महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुका प्रहरी अधिकारीहरुले यसरी चकित भएका हुन । त्यसको कारण थियो – हजुरबुबा नेपाल प्रहरीबाट अवकाशप्राप्त आईजीपी खड्गजित बराल र चिकित्सक आमा–बाबुका छोरा पुजनले म्यादीमा आवेदन दिनु ।
काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी छविलाल जोशीले पनि पूर्वआईजीपी बरालका नाति पुजनले म्यादीमा आवेदन दिन आएको सुनेपछि अचम्ममा परे । पछि आफैं यसबारे जानकारी लिन गएपछि मात्रै एसएसपी जोशीलाई पत्यार लागेको थियो । अन्योल र कानेखुसीबीच टेकुस्थित काठमाडौं प्रहरीले पूर्वआईजीपी बरालका नाति पुजनको आवेदन दर्ता गरायो ।
त्यसपछि उनी वैशाख ३१ का लागि तय भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ५५ दिनसम्म म्यादी सुरक्षाकर्मीका रुपमा खटिने पक्का भएको छ । उनका बाबु डा. रञ्जित बराल बल्खुस्थित बयोधा अस्पतालमा मुटु रोग र आमा प्रा.डा. ज्योति बराल त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा प्रसुति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञका रुपमा कार्यरत छन् । कारोवार दैनिकका अनुसार,९० वर्ष पुग्नै लागेका पूर्वसांसद् तथा पूर्वराजदूत हजुरबुबा खड्गजितले आमा(बाबु वा हजुरबुबाको नाम तथा दामले नर्भइ सबैले आफ्नै मेहनत र परिश्रमले जीवन निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाउन नातिलाई म्यादी प्रहरीमा पठाएको बताए ।
प्रचण्डले थाले मधेसी मोर्चाका नेतासँग टेलिफोन संवाद
समाजवादी फोरमले काठमाडौ केन्द्रीत आन्दोलन गर्ने
अखण्ड मध्यपश्चिमको माग गर्दै सल्यानमा बिशाल प्रर्दशन
एकाबिहानै काठमाडौंमा भूकम्पको धक्का
अर्जुननरसिंह केसीको दुखेसो ‘मलाई अन्र्तघात गर्नेलाई चिनेको छु, तर अहिले भन्दिँन’
धादिङमा बस दुर्घटना ८ जनाको मृत्यु, १५ घाइते